Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0112 lak
Alakamisy 04 Okt.
“Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an’i Jehovah, dia fidionareo anio ary izay hotompoinareo, na ny andriamanitra izay notompoin’ny razanareo tany an-dafin’ny Ony, na ny andriamanitry ny Amorita, izay mponina teto amin’ny tany onenanareo; fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an’i Jehovah izahay” - Jos. 24:15. Ahoana no fomba anehoan’io andininy io ny olana goavana indrindra ao anatin’ny fifanandrinan’ny tsara sy ny ratsy?
Asehon’ny faminaniana antsika ireo toe-javatra farany izay mamarana io ady eo amin’Andriamanitra sy i Satana io. Tao anatin’ny 1260 taona (Dan. 7:25; 12:7; Apôk. 11:2; 12:14; 13:5) dia niseho tsindraindray kanefa mitohy ny fanenjehan’i Satana ny vahoakan’Andriamanitra. Ao anatin’ny fifandonana farany voasoratra ao amin’ny Apôk. 12 sy 13 no ampiasan’i Satana ny fahefana anankiroa eto an-tany: bibidia iray tahaka ny leôparda (Apôk. 13:1-10) ary bibidia iray manan-tandroka roa (Apôk. 13:11-17). Ampiasain’izy roa ireo ilay tetik’adin’i Satana noresahintsika tao amin’ny lesona omaly.
Ny Apôk. 14 dia fitantarana ny fanoherana ireo tetik’adin’i Satana, izay ataon’Andriamanitra mandritra ireo dingana farany amin’ny ady ka hamaranany izany. Inona no ambaran’ny Apôk. 14:6-13 amintsika mikasika ireo fomba hampiharihariana ireo toe-javatra sasantsasany ao anatin’ny fifanandrinana lehibe?
Araka ny fijerin’Andriamanitra, dia tena ilaina ny fanambarana mazava ireo olan’ny tafiditra ao anatin’ny fifanandrinana (aseho ho hafatra entin’anjely telo izy eto) mialoha ny hifaranan’ny ady. Mila ampahafantarina amin’ny taranak’olombelona amin’ny fomba mahomby izany mba handraisan’izy ireo fanapahan-kevitra mikasika ireo olana ireo.
Hisy mantsy ny hijoro ho mahatoky amin’Andriamanitra amin’ny fifaranan’ny ady. Aseho amin’ny isa 144000 izy ireo ao amin’ny Apôk. 14, ary azo heverina fa maneho olona tsy hita isa avy amin’ireo firenena rehetra ambonin’ny tany izany (Apôk. 7:4). Mitoetra ho mpankatò ny didin’Andriamanitra hatrany izy ireo amin’ny fotoan’ny fahoriana lehibe ary manolo-tena hiankohoka amin’Andriamanitra Mpamorona amin’ny fony manontolo. Mahazo ny fankasitrahana avy amin’Andriamanitra izy ireo ary ny mpanota tsy mety mibebaka kosa dia ho levona mandritra ny fijinjana nomanina ho azy (Apôk. 14:14-20). Ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy maintsy hifarana io ady lehibe io indray andro any.
Ity no zavatra iray tsara ho fantatra mikasika io fifanandrinana lehibe io: tsy misy ny sady tsy an’ny atsy no tsy an’ny aroa. Na ianao miandany amin’ny ilany havia na miandany amin’ny ilany havanana. Azon’ny rehetra atao ny milaza fa miandany amin’ny Tompo izy (jereo Jao. 16:2); kanefa ahoana moa no ahazoanao antoka fa tena miandany Aminy tokoa ianao? Ento eo amin’ny kilasy amin’ny Sabata ny valin-teninao.